Ciidamada Itoobiya oo qarka u saaran inay ka baxaan magaalooyin dhowr ah – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Itoobiya oo qarka u saaran inay ka baxaan magaalooyin dhowr ah
Ciidamada Itoobiya ayaa qarka u saaran inay ka baxaan magaalooyin dhowr ah oo ku yaala Gobolada Koofurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyadoo todobaadyadii u dambeeyay faarujiyay deegaano dhowr ah oo sanado ka hor ay ka saareen Al-Shabaab.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya ka bixitaanka Ciidamada Itoobiya ee deegaanada gobolada dalka, waxaana loo sababeynayaa kacdoonka iyo rabshadaha ka dhanka ah dowladda ee ka socda gudaha dalka Itoobiya.
Sidoo kale waxaa soo baxday ciidamada qaar ay sameeyeen amar diido iyo inay la goosteen hubka, waxaana maalmo ka hor soo baxday in dagaal dhexdooda ku dhex maray degmada Ceelbuur, inkastoo wararkan aanay aheyn kuwo la xaqiijiyay.
Deegaanada laga yaabo inay ka baxaan ayaa ka mid ah degmada Tiyeeglow oo maalin ka hor ay Mas’uuliyiinta maamulka deegaanka u sheegeen inay ka baxayaan degmada.
Sidoo kale waxaa la sheegayaa inay isku diyaarinayaan ka bixitaanka degmooyinka Ceelbuur, Maxaas iyo Xudur.
Ciidamada Itoobiya ayaa sanadkii 2014 ku biiray howl galka AMISOM, waxaana diiwaan-gashan 4,000 oo askari oo ku kala sugan Baydhabo iyo Beledweyn, waxaana ciidamo tiro badan oo aan ku jirin howl galka AMISOM ay ku sugan yihiin deegaanada gobolada dalka.
Saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegaya in Taliska AMISOM aanay kula xisaabtami karin Ciidamada Itoobiya ka bixitaanka deegaanada qaar, maadaama ciidanka horay u qabtay aanay ka tirsaneyn howl galka.
Wararkii ugu dambeeyay howlgal ciidamada ay ka sameeyeen Baledweyne